१२ वर्षपछि भाइरल भएको 'फूलबुट्टे सारी' को कथा :: Setopati
१२ वर्षपछि भाइरल भएको 'फूलबुट्टे सारी' को कथा कसरी पुनर्जन्म भयो यो गीतको?
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, पुस २७
राजनराज शिवाकोटी र 'फूलबुट्टे सारी' गीतका दृश्य
अचेल टिकटकले पुराना गीत हिट बनाइदिएर धेरै सर्जकलाई रमाइलो झट्का दिन थालेको छ। यस्तो झट्का पाउनेमध्ये राजनराज शिवाकोटी सबभन्दा भाग्यमानी हुन्।
आफैंले बिर्सेको एउटा पुरानो गीतले उनलाई चर्चाको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ। गीत हो— फूलबुट्टे सारी।
हजारौंले टिकटक बनाएको यो गीतमा दर्जनौंले युट्युब कभर भिडिओ बनाएका छन्। सार्वजनिक भेला, सार्वजनिक यातायातदेखि रेस्टुरेन्टमा यो गीत गुन्जिरहेको छ। बाटो हिँड्दै गर्दा पनि कसै न कसैले यो गीत गुनगुनाएकै हुन्छन्।
'फूलबुट्टे सारी' राजनराजको शब्द-संगीतमा १२ वर्षअघि रेकर्ड भएको गीत हो। यो गीत गायक मार्मिक लामाले गाएका थिए।
राजन भन्छन्, 'यो गीत मेरो स्मृतिबाट हराउन लागिसकेको थियो।' संगीत क्षेत्रमा निष्क्रिय भइसकेका मार्मिकलाई त यो गीतबारे झनै वास्ता थिएन।
राजनराज शिवाकोटी। तस्बिर सौजन्यः राजनराज शिवाकोटीको फेसबुक
एकाएक टिकटकमा यो गीतको भिडिओ बन्न थाल्यो। स्रोता दर्शकले आफैं यो गीत खोज्दै युट्युब चहार्न थाले। त्यसबेला यो गीतको म्युजिक भिडिओ बनाइएको थिएन। तर युट्युबमा प्रतीक गुरुङले तीन वर्षअघि यसको कभर भर्सन अपलोड गरेका थिए। स्रोता-दर्शक प्रतीककै भर्सनमा रमाए। प्रतीकको भिडिओको भ्युज र च्यानल सब्सक्राइबर ह्वात्तै बढ्यो।
यसैबीच गायक मार्मिककै स्वर भएको गीतको अडिओ युट्युबमा अपलोड हुन थाल्यो। यसरी चर्चा पाइरहेको आफ्नै गीतबारे राजन भने यतिन्जेल बेखबर थिए।
उनलाई एक जना परिचितले गीतबारे जानकारी दिँदै भने, 'यो त तपाईंको गीत हो नि।'
त्यसपछि बल्ल राजनले गीतको खोजी गरे। उनले मार्मिकलाई मनैदेखि धन्यवाद दिए। अनि गायक प्रतीकसँग सम्पर्क गरे।
त्यसपछि राजनको पहलमा मार्मिककै स्वरमा गीत पुनः रेकर्ड भयो। गत अक्टोबर २४ मा सोही गीतको म्युजिक भिडिओ बन्यो। यो गीतको भिडियो राजनले आफै‌ं आबद्ध देवीथान म्युजिकको युट्युब च्यानलबाट अपलोड गरे। त्यसपछि त गीत भाइरल नै भयो। हाल मार्मिकको स्वरको भिडिओले युट्युबमा एक करोड तीस लाखभन्दा बढी भ्यूज बटुलिसकेको छ।
गीतले १२ वर्षपछि राजन र मार्मिकलाई नयाँ चर्चा दिलायो। गीतको टिकटक बनाउनेहरू फेरि थपिए।
मार्मिकले गाएको गीतको एउटा अंश यस्तो छ,
कान्छीको केश फिँजारिएछ
मै कोरी बाटी गरिदिऊँ कि
राजनलाई टिकटकमा महिलाले कान्छीको केश भनेको अलि असुहाउँदो लागेछ। त्यसपछि उनले गीतको फिमेल भर्सनबारे सोचे र मिलन नेवारको स्वरमा फेरि रेकर्ड गराए।
कान्छाको केश फिँजारिएछ
काइँयोले चट्ट मिलाइदिऊँ कि
पल शाह र मलिका महतको अभिनय र मिलनको स्वरको भिडिओ त झन् यति चर्चित भयो, त्यसले दुई सातामै करोड भ्यूज पाएर नयाँ रेकर्ड बनायो। हाल फिमेल भर्सनको युट्युब भ्यूज एक करोड असी लाख नाघिसकेको छ।
सामान्यतया गीत लोकप्रिय बन्न शब्द, संगीत र स्वरको संयोजन मिल्नुपर्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै गीत चल्दैनन्। चल्ने भए यो गीत एक दशकअघि नै हिट हुन्थ्यो होला।
राजन वर्षौंपछि आएर गीत हिट हुनुलाई समयको खेल मान्छन्।
'साइकलको चेन दाँतीमा परे साइकल गुड्छ, नपरे गुड्दैन,' उनले भने, 'त्यतिबेला यो गीत राम्रो भएर पनि दाँतीमा नपरेको चेनजस्तै भएको थियो। अहिले चेन सही ठाउँमा परेजस्तो भएको छ। सबै समयको खेल रहेछ।'
उनलाई यो गीत ढिलै भए पनि हिट भएपछि लागेको छ, 'कुनै पनि सिर्जना हिट वा फ्लप हुन्न रहेछ। त्यो सही ठाउँ र समयमा पर्‍यो कि परेन भन्ने महत्वपूर्ण कुरा रहेछ।'
त्यसैले उनी कुनै पनि सिर्जना फ्लप वा हिट भनेर सर्जकलाई वा स्रोतालाई दोष दिन नहुने निष्कर्षमा पुगेको बताउँछन्।
संगीत, सिनेमा वा अरू कला विधामा आधुनिकता र मौलिकताको संयोजन खोजिरहेको समय हो यो। फूलबुट्टे सारीको शब्द र संगीत दुवैमा आधुनिकता र मौलिकताको मिश्रण भेटिन्छ।
राजनले भने, 'अहिलेका स्रोता-दर्शकले यो गीतमा नयाँ समयको माग अनुसार शैली भेटे कि?'
गीतमा फूलबुट्टे सारी, सपक्क, कौसी, जाइजुई, चमेलीजस्ता जनबोलीका शब्द प्रयोग भएका छन्। त्यसैले गीतका शब्दले मात्रै पनि भाव अनुसारको दृश्य दिन्छ। विपरित लिंगीप्रति आकर्षित युवा हृदयको भावना बोकेको यो गीतको संगीतमा पनि लोक र पप शैली मिसिएको लय भेटिन्छ।
झनै, गीतको अलग अलग भर्सनमा स्रोता दर्शकले नयाँ नयाँ स्वाद भेटेका छन्। फरक फरक समयमा नयाँ भर्सन आएकाले पनि यो गीतले स्रोतालाई जोडिराखेको छ। त्यसैले यसको चर्चा लम्बिइरहेको छ।
राजन यो गीत रुचाइनुमा गायक-गायिकाको फरक शैलीको गायकीलाई पनि श्रेय दिन्छन्। तर सबभन्दा बढी श्रेय उनले प्रतीकलाई दिए जसले यो गीत तीन वर्षअघि नै युट्युबमा राखेका थिए।
उनले भने, 'प्रतीक गुरुङले हराएको मणि फिर्ता गरिदिनुभयो। मैले उहाँलाई फोन गरेर मनैबाट धन्यवाद भनेँ।'
लोक र आधुनिक शैलीको स्वर, संगीतमा युवा पुस्ताको प्रेम भावना व्यक्त गरिएकाले गीतले गाउँ र सहर दुवैतिरका स्रोता आकर्षित गर्न सफल भयो। यो गीत लेख्ने बेला राजन पनि त युवा नै थिए।
१३ वर्षअघिको कुरा हो।
राजन आफ्नो जन्मथलो दोलखा, डाँडाबारीमाथिको जंगलमा थिए। जंगलमा मौवाको रुख छ। त्यसको फेदमा बसेर बाख्रा चराउँदा उनी खुब रमाउँथे। बाख्रा चराउँदै स्याउलाका पत्कर जम्मा गरेर ढुंगाको सिरानी बनाएर पल्टिन उनलाई आनन्द आउँथ्यो। त्यस्तै बेला उनी कल्पिएर गीतका शब्द र लय बुन्थे।
फूटबुट्टे सारी त्यही मौवाको फेदमा बसेर रचेको सम्झँदा मात्रै पनि उनी रोमाञ्चित हुन्छन्। युवा अवस्थामा गाउँ सहर डुल्दा युवाहरू चिटिक्क परेर कौसीमा सिंगारिएर बसेको दृश्य उनलाई निकै जँच्थ्यो। भने, 'यो कुराले मेरो दिमागमा छाप छाडेको थियो।'
कौसीमा बसी बाटोमा हेर्दा कपाल फिँजारेर वा चिटिक्क पारेर हिँडिरहेका युवक-युवतीलाई देख्दा कस्तो भाव जाग्ला भनेर उनी कल्पिन्थे।
'त्यही दृश्य कल्पिँदा कपाल फिँजारिएको युवतीलाई कोरिबाटी गरेर चिटिक्क पार्दिन पाए कस्तो होला भन्ने सोचेर गीत बनाएको थिएँ,' उनले भने।
यो गीत आफ्नै कथा नभएर अरुको भावना परिकल्पना गरेर बनाएको उनी बताउँछन्। तर गीतमा आफूले देखेका पात्र र परिवेशको असर पर्ने उनी स्वीकार्छन्।
राजनले भने, 'आफूले पनि बार्दलीमा बसेर कति युवतीलाई हेरियो होला। त्यसले गीत बनाउन सहयोग गर्ने नै भयो।'
त्यही गीत अहिले सुपरहिट हुँदा भने उनलाई पत्याउनै गाह्रो परेको छ।
हुन त राजनको यो पहिलो हिट गीत हैन। उनी नेपाली संगीत क्षेत्रका 'हिट मसिन' मानिन्छन्। उनले संगीत भरेका, लेखेका र गाएका दर्जनौं गीत चर्चित छन्।
२०५९ सालदेखि निरन्तर संगीतमा लागेका उनले पप, आधुनिक र लोक सबै शैलीमा सफलता पाएका छन्। नवीन के भट्टराईको स्वरको 'अलिकति पीडा हुँदा नि', अनिल सिंहले गाएको 'म माया गर्छु' जस्ता चर्चित गीतका सर्जक हुन्। अन्जु पन्तको स्वरको चर्चित आधुनिक गीत 'जिन्दगी यो फूलैफूल' पनि राजनकै सिर्जना हो।
पछिल्लो समय सिनेमामा सक्रिय उनले 'सुर्के थैली', 'कुटुमा कुटु', 'पूर्व पश्चिम रेल' जस्ता गीतबाट चर्चाको उत्कर्ष चुमे। उनका 'वार्ता गराइदेऊ', 'एमजी रोडैमा' जस्ता गीत पनि चलेका छन्। युट्युबमा करोड भ्यूज नाघेका गीतको सूचीमा राजनकै नाम र काम अगाडि आउँछ।
'गीत हिट भएपछि सर्जकमा के हेरफेर आउँछ?'
यसको जवाफमा उनले भने, 'हरेक हिट गीतपछि खुसी त लाग्छ। तर त्यस्तै राम्रो गीत बनाउने चुनौती थपिन्छ।'
फूल बुट्टे सारीको चर्चापछि त उनी आफूले लामो समय काम गर्न नसकेको बताउँछन्।
'फूलबुट्टे सारीको सफलतापछि स्वभाविक रुपमा नयाँ ऊर्जा थपिएको छ। तर यसले थपेको चुनौतीकै दबाबमा नयाँ काम गर्न नसकेको धेरै भयो।'
अहिले राजन साँच्चै 'फूलबुट्टे सारी'को अपार सफलताको 'ह्याङओभर'मा छन्। त्यसैले त उनले यो गीतको चाइल्ड भर्सन पनि गत साता सार्वजनिक गरे।
यसमा स्वर दिएकी अरिष्मा शिवाकोटी उनकै छोरी हुन्। आफूसहित प्रतीक गुरुङ, मार्मिक लामा, मिलन नेवार, मलिका महत, अरिष्मा लगायतलाई चर्चामा ल्याइदिने फूलबुट्टे सारीको लहर यहीँ नसकिएको राजनले बताए। भने, 'अझै अर्को केही सर्प्राइज बाँकी छ। यसका लागि केही समय कुर्नपर्नेछ।'
टिकटकसँग आममानिसको दैनिक जोडिएको करिब दुई वर्ष भयो। यति छोटो समयमा यसले संगीत उद्योगमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। नयाँ तथा पुराना कलाकारलाई अप्रत्याशित चर्चामा ल्याइदिने टिकटकमा संगीत प्रयोग भएकाबारे कतिपय संगीतकर्मी भने सन्तुष्ट छैनन्।
यसको कारण हो, अचेल टिकटकमा हिट बनाउने भनेर गीतका शब्द समेत हेरफेर गरिन थालिएको छ। एकल स्वरमा गाउन तयार पारिएका कयौं गीत टिकटकमा डुएट चलोस् भनेर महिला र पुरुषको स्वरमा रेकर्ड गराउन थालिएको छ। तर टिकटकमा स्रोता-दर्शकले आफ्नै रोजाइ र पहलमा खोजेका गीत पनि छन्। यस्ता गीतबाट सर्जकले आफ्नो सिर्जनाको कदर भएको महसुस गर्न पाएका छन्।
'फूलबुट्टे सारी' त्यस्तै गीत हो, जसलाई वर्षौंपछि मृत्युसैय्याबाट स्रोता-दर्शकले उठाए र पुनर्जन्म दिए।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २७, २०७७, १६:०१:००